Ndingaita Sei Kuti Ndisaramba Ndichingofunga Bonde? | Vechidiki Vanobvunza Kuti
SARUDZA MUTAURO Afrikaans Albanian Amharic Arabic Arabic (Lebanon) Armenian Azerbaijani Belize Kriol Bislama Catalan Cebuano ChiSutu (South Africa) Chichewa Chinese Cantonese (Simplified) Chinese Cantonese (Traditional) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chirungu Chitonga Chitumbuka Croatian Czech Danish Dutch Estonian Ewe Faroese Fijian Finnish French Ga Georgian German Greek Gun Hebrew Hiligaynon Hungarian Iban Icelandic Iloko Indonesian Isoko Italian Japanese Javanese Kannada Kikaonde Kikuyu Kiluba Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Korean Kurdish Kurmanji (Caucasus) Kurdish Kurmanji (Cyrillic) Kwanyama Lingala Lithuanian Macedonian Malagasy Malay Malayalam Mutauro Wemasaini wechiSpanish Mutauro Wemasaini wokuAmerica Mutauro Wemasaini wokuBrazil Mutauro Wemasaini wokuItaly Mutauro Wemasaini wokuPoland Mutauro Wemasaini wokuRussia Myanmar Ndau Ndebele (Zimbabwe) Norwegian Nzema Ossetian Pangasinan Papiamento (Curaçao) Persian Polish Portuguese (Brazil) Portuguese (Portugal) Romanian Russian Sango Serbian (Cyrillic) Serbian (Roman) Setswana Seychelles Creole Shona Sinhala Slovak Slovenian Spanish Sunda Swahili Swedish Tagalog Tatar Thai Tigrinya Tojolabal Turkish Ukrainian Urhobo Uzbek Uzbek (Roman) Valencian Vietnamese Welsh Yoruba
Audio Nzira dzokudhaunirodha zvakarekodhwa Ndingaita Sei Kuti Ndisaramba Ndichingofunga Bonde?
“Ndinoerekana ndava kungofunga nezvebonde uye ndizvo zvinenge zvangozara mupfungwa dzangu. Zvinoita sekuti pane mumwe munhu ava kutodzora pfungwa dzangu.”—Vera.
“Zvakandiomera kuti ndirege kufunga nezvebonde. Zvakafanana sekuedza kubhururuka uchishandisa maoko ako semapapiro.”—John.
Unonzwawo sezvinoita Vera naJohn here? Kana zvakadaro, nyaya ino ichakubatsira.
Nei usingafaniri kugara uchingofunga bonde?
Nei zvakaoma kuti urege kufunga zvebonde?
Mumwe mukomana anonzi Alex anoti, “Sekuru vangu vakandiudza kuti kudai Mwari aisada kuti ndiite zvebonde angadai asina kundipa chido chacho.”
Zvimwe zvakataurwa nasekuru vaAlex ndezvechokwadi. Mwari akatipa chido chebonde uye akazviita nechikonzero. Nhasi panyika pane vanhu nekuti tinokwanisa kuberekana. Saka nei uchifanira kudzivisa kugara uchingofunga nezvebonde? Ngationei zvikonzero zviviri:
Bhaibheri rinodzidzisa kuti chinangwa chaMwari ndechekuti bonde riitwe nemurume nemukadzi vakaroorana chete.—Genesisi 1:28; 2:24.
Kana uchiremekedza zvinotaurwa neBhaibheri, kuramba uchingofunga nezvebonde iwe usati waroora kana kuroorwa kunoita kuti ushungurudzike. Unogona kutopedzisira waita bonde nemumwe munhu uye vakawanda vakazozvidemba pavakaita izvozvo.
Kana ukadzidza kubvisa pfungwa dzebonde mumusoro mako unenge uchitodzidza kuva munhu anozvidzora uye zvichakubatsira pane zvakawanda muupenyu.—1 VaKorinde 9:25.
Unhu ihwohwo huchakubatsira kuti ubudirire pane zvaunoita iye zvino kunyange mune ramangwana. Imwe ongororo yakaitwa yakaratidza kuti vana vanozvidzora havazonetseki neutano, kushushikana nekushaya mari kana kuti kupara mhosva pavanenge vakura. *
Mahomoni anobudiswa nemuviri wako paunenge uchiyaruka, kwozotiwo nyika iri kuita kupenga nebonde, zvese izvi zvinoita kuti zviome kurega kufunga nezvebonde.
“Mapurogiramu ese anobuda paTV anoita kuti zviite sekuti hapana chakaipa nekuita bonde musati maroorana uye kuti hapana ngozi dzinozovapo. Zviri nyore kuti pfungwa dzirambe dzichifunga zvebonde kana bonde richiratidzwa paTV sekuti harina charakaipira.”—Ruth.
“Pandinenge ndiri kubasa, ndinonzwa vanhu vachitaura zvinyadzi nezvebonde uye zvinobva zvaita kuti ndide kuziva zvakawanda. Vanhu vakawanda vanoona pasina chakaipa nekuita unzenza uye zvakaoma kuti usatevedzera mafungiro iwayo.”—Nicole.
“Zviri nyore chaizvo kuti uvarairwe paunenge uchitarisa mifananidzo pasocial media. Kana ukaona chinhu chisina kunaka chinogona kubva chapinda mupfungwa dzako zvekuti hauzombofi wakachikanganwa!”—Maria.
Zvinhu zvakaita seizvi zvinogona kuita kuti unzwe sezvakaita muapostora Pauro. Akanyora kuti: “Pandinoda kuita zvakarurama, zvakaipa zviri mandiri.”—VaRoma 7:21.
Usabvumira kuti pfungwa dzakaipa dzivake dendere mumusoro mako
Funga zvimwe zvinhu. Edza kuisa pfungwa dzako pane zvimwe zvinhu zvisiri bonde. Izvi zvinogona kusanganisira zvinhu zvaunonakidzwa nekuita, mutambo, kuekisesaiza, kana kuti chimwe chinhu chinoita kuti utange kufunga zvinhu zvakanaka. Mumwe musikana anonzi Valerie anoti, “Kuverenga Bhaibheri kunobatsira. Paunoverenga Bhaibheri zvinoita kuti ufunge nezvaMwari, uye kana uchifunga nezvaMwari zvakaoma kuti uzotanga kufunga zvimwewo zvinhu.”
Pfungwa dzebonde dzichatombouya. Asi nyaya iri pakuti uchaita sei kana zvaitika. Kana uchida hako unogona kudzidzivisa.
“Kana ndikatanga kufunga zvisina basa, ndinozvimanikidza kuti nditange kufunga zvimwe zvinhu. Ndinotsvaga chinenge chakonzera kuti nditange kufunga zvisiri izvo, rungava rwiyo kana mufananidzo wandinofanira kudzima.”—Helena.
Zvinotaurwa neBhaibheri: “Zvinhu zvese zvakarurama, zvinhu zvese zvakachena, . . . rambai muchifungisisa zvinhu izvi.”—VaFiripi 4:8.
Sarudza shamwari dzakanaka. Kana shamwari dzako dzichingogara dzichitaura nezvebonde, zvichakuomera kuti ufunge zvinhu zvakachena.
“Pandaiyaruka, ndainetseka chaizvo nezvandaifunga, uye chainyanya kuita kuti zvidaro dzaiva shamwari dzangu. Kana uchigara uine vanhu vanokukurudzira kuita zvakaipa, zvinoita kuti utadze kudzora manzwiro aunenge uinawo uye zvinobva zvaita sewadira peturu mumoto.”—Sarah.
Zvinotaurwa neBhaibheri: “Munhu anofamba nevanhu vakachenjera achava akachenjera, asi uya anoshamwaridzana nemapenzi zvichamuipira.”—Zvirevo 13:20.
Usazvivaraidza nezvinhu zvisina kunaka. Zvinhu zvakawanda zvinovaraidza vanhu mazuva ano zvazara neunzenza. Nicole anoti, “Mimhanzi ndiyo inonyanya kundikanganisa, ndinopedzisira ndava kutotadza kudzora chido chandinenge ndava nacho.”
“Ndakatanga kuona mafirimu nemapurogiramu epaTV aibuditsa zvinhu zvepabonde. Ndakazongoona ndava kungofunga zvinhu zvepabonde. Zvaiva nyore kuti ndione kuti pfungwa idzodzo dzakanga dzabva kupi. Pandakangorega kuona mafirimu nemapurogiramu epaTV iwayo, ndakanga ndisisanyanye kufunga nezvebonde. Kusangoona zvese zvese kunobatsira chaizvo pakukunda hondo yekudzivisa pfungwa dzakaipa.”—Joanne.
Zvinotaurwa neBhaibheri: “Upombwe nezvinhu zvisina kuchena zvemarudzi ese kana makaro ngazvirege kana kutombotaurwa nezvazvo pakati penyu.”—VaEfeso 5:23.
Pfungwa inokosha ndeiyi: Vamwe vanhu vanofunga kuti havafaniri kudzora chido chavo chebonde uye vanotoona sezvisingagoneki kuti munhu adzore chido ichocho. Asi handizvo zvinodzidziswa neBhaibheri. Rinoti tinokwanisa kudzora zvatinofunga, uye izvi zvinoratidza kuti Mwari anokoshesa zvatinoita.
Zvinotaurwa neBhaibheri: “Munofanira kuramba muchiitwa vatsva pamafungiro enyu.”—VaEfeso 4:23.
“Zvinhu zvekuzvivaraidza nazvo zvinoita sezviri kungogadzirwa nechinangwa chekuti vanhu vagare vachingofunga zvinhu zvisina kunaka. Tinofanira kusarudza vanhu vatinotandara navo uye tinofanira kuita zvese zvatinogona kuti tisaverenga kana kuona zvinhu zvese zvese. Tinofanira kudzivisa mamiriro ezvinhu anoita kuti tipedzisire tava nepfungwa dzakaipa.”—Tyler.
“Kuva nepurogiramu yekuverenga Bhaibheri, kudzidza uye kunyengetera kunobatsira kuti uve munhu anozvidzora. Kakawanda, munhu ane dambudziko rekugara achifunga zvinhu zvisina kunaka anenge asina purogiramu iyi.”—Yadi.
Kudzokorora: Ndingaita Sei Kuti Ndisaramba Ndichingofunga Bonde?
Funga zvimwe zvinhu.
Sarudza shamwari dzakanaka.
Usazvivaraidza nezvinhu zvisina kunaka.
Zvekufunga nezvazvo: Ndepapi paunofanira kugadzirisa?
^ ndima 9 Vakaroorana vanofanirawo kuva vanhu vanozvidzora, saka zvakanaka kuti ugare wadzidza kuva neunhu uhwu usati waroora kana kuroorwa.
Inzwa zvinhu zvitatu zvinogona kukubatsira kukunda miedzo.
Tumirawo vamwe Tumirawo vamwe Ndingaita Sei Kuti Ndisaramba Ndichingofunga Bonde?
ijwyp nyaya 89